အီရန်နိုင်ငံ၏ လူဦးရေစစ်တမ်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀ရာစု၏တဝက်နောက်ပိုင်းတွင် အီရန်လူဦးရေသည် သိသိသာသာတိုးလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် အထိ သန်း၈၀ မျှဖြစ်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်း သားဖွားနှုန်းသည် သိသာစွာကျဆင်းခဲ့သည်။ လေ့လာတွေ့ချက်များအရဆိုရလျှင် အီရန်လူဦးရေသည် ၂၀၅၀ ခုနှစ်အထိ သန်း၁၀၀ မျှ မြင့်တက်သွားနိုင်ချေရှိသည်။ လက်ရှိအီရန်လူဦးရေ၏ထက်ဝက်ကျော်ခန့်သည် အသက်၃၅နှစ်အရွယ်များဖြစ်ကြသည်(၂၀၁၂)။
၂၀၀၉ခုနှစ်အတွင်း အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ ၁၅.၃ သန်းရှိပြီး မိသားစုတစ်စုအတွင်း၌ ပျမ်းပျ၄.၈ယောက်ရှိသည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် မိသားစုတစ်စု၏ တစ်လဝင်ငွေသည် ၁၁.၈ သန်းရီယာလ်(၉၆၀ ဒေါ်လာခန့်)ရှိပေသည်။
ကမ္ဘာ့ဗဟိုဘဏ် OECD ၏ စစ်တမ်းအရ အီရန်၏ လူဦးရေတိုးမြင့်မှုသည် ၁၉၉၀မှ၂၀၀၈ခုနှစအတွင်း ၁၇.၆ နှင့် ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အတွင်းမှ ပညာတတ်ဦးရေသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ၈၀ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သည်။ ။
၉.၁ Y -ခရိုမိုဆုန်း DNA
၉.၂ Mitochondrial DNA
၁၀ People of Iranian ancestry
၁၀.၁ Tats (Caucasus)
၂၀၁၆ခုနှစ် လူဦးရေစစ်တမ်းကောက်ခံချက်အရ အီရန်လူဦးရေသည် ၇၉.၉ သန်းဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၆ ခုနှစ် ထက် ၄ဆ ပိုလာခဲ့သည်။ ၁၉၇၆မှ၁၉၈၆ ခုနှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် သာမန်သာတိုးလာခဲ့သည်။ ၎င်းတိုးနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် ၄ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။သို့သော် ၂၀၁၁မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အထိ သားဖွားနှုန်းအလွန်ကျဆင်းခဲ့သည့်အတွက် ၁.၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ တိုးလာခဲ့သည်။
၁၉၅၆-၁၁-၀၁ ၁၈၉၅၄၇၀၄ ။ ၁၂ ၃၁.၄
၁၉၆၆-၁၁-၀၁ ၂၅၇၈၅၂၁၀ ၃.၁၃ ၁၆ ~၃၇.၅
၁၉၇၆-၁၁-၀၁ ၃၃၇၀၈၇၄၄ ၂.၇၁ ၂၀ ၄၇.၀ ၅.၀၂
၁၉၈၆-၁၁-၂၂ ၄၉၄၄၅၀၁၀ ၃.၉၁ ၃၀ ~၅၄.၀ ၅.၁၁
၁၉၉၆-၁၁-၀၁ ၆၀၀၅၅၄၈၈ ၂.၀ ၃၇ ~၆၁.၀ ၄.၈၄
၂၀၀၆-၁၁-၀၁ ၇၀၄၉၅၇၈၂ ၁.၆၂ ၄၃ ၆၈.၅ ၄.၀၃
၂၀၁၁-၁၁-၀၁ ၇၅၁၄၉၆၆၉ ၁.၂၉ ၄၆ ၇၁.၄ ၃.၅၅
၂၀၁၆-၁၁-၀၁ ၇၉၊၉၂၆၊၂၇၀ ၁.၂၄ ၄၉ ၇၄.၀ ၃.၃
၁၉၅၀-၁၉၅၅ ၉၃၃၀၀၀ ၅၂၉၀၀၀ ၄၀၄၀၀၀ ၅၀.၆ ၂၈.၇ ၂၁.၉ ၆.၉၃ ၂၆၂.၁
၁၉၅၅-၁၉၆၀ ၁၀၁၈၀၀၀ ၅၀၅၀၀၀ ၅၁၄၀၀၀ ၄၉.၂ ၂၄.၄ ၂၄.၈ ၆.၉၃ ၂၁၂.၅
၁၉၆၀-၁၉၆၅ ၁၀၉၃၀၀၀ ၄၇၉၀၀၀ ၆၁၄၀၀၀ ၄၆.၅ ၂၀.၃ ၂၆.၂ ၆.၉၃ ၁၇၂.၆
၁၉၆၅-၁၉၇၀ ၁၁၆၄၀၀၀ ၄၅၅၀၀၀ ၇၀၉၀၀၀ ၄၃.၃ ၁၆.၉ ၂၆.၄ ၆.၇၀ ၁၄၀.၇
၁၉၇၀-၁၉၇၅ ၁၂၅၃၀၀၀ ၄၄၃၀၀၀ ၈၁၁၀၀၀ ၄၀.၈ ၁၄.၄ ၂၆.၄ ၆.၂၄ ၁၁၆.၄
၁၉၇၅-၁၉၈၀ ၁၅၀၃၀၀၀ ၄၃၀၀၀၀ ၁၀၇၃၀၀၀ ၄၂.၁ ၁၂.၀ ၃၀.၁ ၆.၂၇ ၉၂.၂
၁၉၈၀-၁၉၈၅ ၁၈၈၉၀၀၀ ၇၂၀၀၀၀ ၁၁၇၀၀၀၀ ၄၄.၄ ၁၆.၉ ၂၇.၅ ၆.၅၄ ၆၉.၈
၁၉၈၅-၁၉၉၀ ၁၉၅၅၀၀၀ ၅၅၀၀၀၀ ၁၄၀၆၀၀၀ ၃၈.၆ ၁၀.၈ ၂၇.၈ ၅.၆၂ ၅၅.၄
၁၉၉၀-၁၉၉၅ ၁၆၃၃၀၀၀ ၃၅၉၀၀၀ ၁၂၇၄၀၀၀ ၂၈.၅ ၆.၃ ၂၂.၂ ၃.၉၅ ၄၇.၁
၁၉၉၅-၂၀၀၀ ၁၃၁၆၄၀၀ ၃၃၃၂၀၀ ၉၈၃၂၀၀ ၂၀.၉ ၅.၃ ၁၅.၆ ၂.၆၃ ၃၂.၀
၂၀၀၀-၂၀၀၅ ၁၂၁၄၄၀၀ ၃၄၅၈၀၀ ၈၆၈၆၀၀ ၁၇.၉ ၅.၁ ၁၂.၈ ၁.၉၇ ၂၅.၀
၂၀၀၅-၂၀၁၀ ၁၃၀၈၀၀၀ ၃၆၉၈၀၀ ၉၃၈၂၀၀ ၁၈.၁ ၅.၂ ၁၃.၀ ၁.၇၉ ၁၉.၀
၂၀၁၀-၂၀၁၅ ၁၃၉၀၆၀၀ ၃၇၆၂၀၀ ၁၀၁၄၄၀၀ ၁၈.၂ ၄.၇ ၁၃.၅ ၁.၇၅ ၁၅.၀
၂၀၁၅-၂၀၂၀ ၁၂၆၆၈၀၀ ၃၆၆၆၀၀ ၉၀၀၂၀၀ ၁၅.၆ ၄.၅ ၁၁.၁ ၁.၆၂
၂၀၂၀-၂၀၂၅ ၁၀၅၉၈၀၀ ၃၉၁၄၀၀ ၆၆၈၄၀၀ ၁၂.၄ ၄.၆ ၇.၈ ၁.၅၃
၂၀၂၅-၂၀၃၀ ၉၀၆၆၀၀ ၄၃၉၈၀၀ ၁၀.၃ ၅.၀ ၅.၃ ၁.၅၀
ဦးရေ၁၀၀၀ တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ မွေးဖွားမှုနှုန်း
ဦးရေ၁၀၀၀ တွင် လမပြည့်မီမွေးဖွားနှုန်း
ဦးရေ၁၀၀၀ တွင် သဘာဝပြောင်းမှု
၁၉၅၉ ၈၆၄၈၄၆ ၁၇၆၂၆၈ ၆၈၈၅၇၈
၁၉၆၀ ၈၇၆၂၀၆ ၁၇၁၀၄၀ ၇၀၅၁၆၆
၁၉၆၁ ၉၀၂၂၆၀ ၁၅၉၃၇၁ ၇၄၂၈၈၉
၁၉၆၂ ၉၅၇၅၀၀ ၁၆၅၄၈၈ ၇၉၂၀၁၂
၁၉၆၃ ၉၂၀၉၆၇ ၁၃၅၉၁၂ ၇၈၅၀၅၅
၁၉၆၄ ၁၁၁၈၉၁၁ ၁၄၅၁၇၄ ၉၇၃၇၃၇
၁၉၆၅ ၁၁၃၉၆၆၃ ၁၇၁၉၄၀ ၉၆၇၇၂၃
၁၉၆၆ ၁၁၀၁၆၀၆ ၁၇၈၉၉၁ ၉၂၂၆၁၅
၁၉၆၇ ၁၀၁၉၃၇၃ ၁၇၉၁၅၉ ၈၄၀၂၁၄
၁၉၆၈ ၁၀၃၇၀၂၂ ၁၇၄၂၀၁ ၈၆၂၈၂၁
၁၉၆၉ ၁၀၉၁၅၁၃ ၁၆၇၆၆၀ ၉၂၃၈၅၃
၁၉၇၀ ၁၁၈၉၂၀၃ ၁၆၃၄၃၀ ၁၀၂၅၇၇၃
၁၉၇၁ ၁၂၃၁၂၂၇ ၁၄၉၃၂၅ ၁၀၈၁၉၀၂
၁၉၇၂ ၁၁၃၈၈၄၈ ၁၅၃၅၆၈ ၉၈၅၂၇၅
၁၉၇၃ ၁၁၉၉၇၇၇ ၁၅၅၀၈၁ ၁၀၄၄၆၉၆
၁၉၇၄ ၁၂၄၈၂၅၆ ၁၄၉၇၈၅ ၁၀၉၈၄၇၁
၁၉၇၅ ၁၃၃၉၂၆၇ ၁၄၈၅၄၃ ၁၁၉၀၇၂၄
၁၄၀၁၄၂၆ ၁၅၅၉၈၁ ၁၂၄၅၄၄၅
၁၉၇၇ ၁၃၉၉၉၇၇ ၁၄၆၃၆၉ ၁၂၅၃၆၀၈
၁၉၇၈ ၁၃၆၉၅၉၇ ၁၂၇၅၈၇ ၁၂၄၂၀၁၀
၁၉၇၉ ၁၆၈၉၉၀၈ ၁၄၂၄၀၂ ၁၅၄၇၅၀၆
၁၉၈၀ ၂၄၅၀၃၀၈ ၁၆၂၁၇၆ ၂၂၈၈၁၃၂
၁၉၈၁ ၂၄၂၁၆၁၁ ၁၇၈၀၉၉ ၂၂၄၃၅၁၂
၁၉၈၂ ၂၁၀၁၈၉၄ ၂၀၀၆၁၄ ၁၉၀၁၂၈၀
၁၉၈၃ ၂၂၀၃၄၄၈ ၂၀၇၂၂၈ ၁၉၉၆၂၂၀
၁၉၈၄ ၂၀၆၇၈၀၃ ၁၈၆၄၄၀ ၁၈၈၁၃၆၃
၁၉၈၅ ၂၀၃၃၂၈၅ ၁၉၀၀၆၁ ၁၈၄၃၂၂၄
၁၉၈၆ ၂၂၅၉၀၅၅ ၁၉၉၅၁၁ ၂၀၅၉၅၄၄
၁၉၈၇ ၁၈၃၂၀၈၉ ၂၀၄၂၃၀ ၁၆၂၇၈၅၉
၁၉၈၈ ၁၉၄၄၁၄၉ ၂၃၈၃၉၀ ၁၇၀၇၅၉
၁၉၈၉ ၁၇၈၄၈၁၁ ၁၉၉၆၄၅ ၁၅၈၅၁၆၆
၁၉၉၀ ၁၇၂၂၉၇၇ ၂၁၇၅၉၇ ၁၅၀၅၃၈၀
၁၉၉၁ ၁၅၈၂၉၃၁ ၂၁၇၆၃၇ ၁၃၆၅၂၉၄
၁၉၉၂ ၁၄၃၃၂၄၃ ၁၈၈၆၄၇ ၁၂၄၄၅၉၆
၁၉၉၃ ၁၃၈၈၀၁၇ ၂၀၈၁၆၁ ၁၁၇၉၈၅၆
၁၉၉၄ ၁၄၂၆၇၈၄ ၃.၅၀
၁၉၉၅ ၁၂၀၅၃၇၂ ၃၀၂၂
၁၉၉၆ ၁၁၈၇၉၀၃ ၂.၉၅
၁၉၉၇ ၁၁၇၉၂၆၀ ၂.၇၃
၁၉၉၈ ၁၁၈၅၆၃၉ ၅၅၁၃၄၅ ၆၃၄၂၉၄ ၂.၅၃
၁၉၉၉ ၆၂၇၃၈ ၁၁၇၇၅၅၇ ၃၇၄၈၃၈ ၈၀၂၇၁၉ ၁၈.၈ ၆.၀ ၁၂.၈ ၂.၃၆
၂၀၀၀ ၆၃၆၅၈ ၁၀၉၅၁၆၅ ၃၈၂၆၇၄ ၇၁၂၄၉၁ ၁၇.၂ ၆.၀ ၁၁.၂ ၂.၁၉
၂၀၀၁ ၆၄၅၉၂ ၁၁၁၀၈၃၆ ၄၂၁၅၂၅ ၆၈၉၃၁၁ ၁၇.၂ ၆.၅ ၁၀.၇ ၂.၀၉
၂၀၀၂ 65,540 ၁၁၂၂၁၀၄ ၃၃၇၂၃၇ ၇၈၄၈၆၇ ၁၇.၁ ၅.၁ ၁၂.၀ ၂.၀၁
၂၀၀၃ 66,480 ၁၁၇၁၅၇၃ ၃၆၈၅၁၈ ၈၀၃၀၅၅ ၁၇.၆ ၅.၅ ၁၂.၁ ၁.၉၂
၂၀၀၄ ၆၇၄၇၇ ၁၁၅၄၃၆၈ ၃၅၅၂၁၃ ၇၉၉၁၅၅ ၁၇.၁ ၅.၃ ၁၁.၈ ၁.၈၇
၂၀၀၅ ၆၈၄၆၇ ၁၂၃၉၄၀၈ ၃၆၃၇၂၃ ၈၇၅၆၈၅ ၁၈.၁ ၅.၃ ၁၂.၈ ၁.၈၂
၂၀၀၆ ၇၀၄၉၆ ၁၂၅၃၉၁၂ ၄၀၈၅၆၆ ၈၄၅၃၄၆ ၁၇.၈ ၅.၈ ၁၂.၀ ၁.၇၉ 
၂၀၀၇ ၇၁၅၃၂ ၁၂၈၆၇၁၆ ၄၁၂၇၃၆ ၈၇၃၉၈၀ ၁၈.၀ ၅.၈ ၁၂.၂ ၁.၈၁
၂၀၀၉ ၇၃၆၅၁ ၁၃၄၈၅၄၆ ၃၉၃၅၁၄ ၉၅၅၀၃၂ ၁၈.၃ ၅.၃ ၁၃.၀ ၁.၇၈
၂၀၁၀ ၇၄၇၃၃ ၁၃၆၃၅၄၂ ၄၄၁၀၄၂ ၉၂၂၅၀၀ ၁၈.၃ ၅.၉ ၁၂.၄ ၁.၇၇
၂၀၁၁ ၇၅၁၄၉ ၁၃၈၂၂၂၉ ၄၂၂၁၃၃ ၉၆၀၀၉၆ ၁၈.၃ ၅.၆ ၁၂.၇ ၁.၇၄
၂၀၁၂ ၇၆၀၂၆ ၁၄၂၁၆၈၉ ၃၆၁၇၅၁၂ ၁၀၅၄၁၇၇ ၁၈.၇ ၄.၈ ၁၃.၉ ၁.၇၃
၂၀၁၃ ၇၇၀၅၉ ၁၄၇၁၈၃၄ ၃၇၂၂၉၇ ၁၀၉၉၅၅၅ ၁၉.၁ ၄.၈ ၁၄.၃ ၁.၇၀
၂၀၁၄ ၁၅၃၄၃၂၆ ၄၄၆၃၃၃ ၁၀၈၈၀၂၉ ၁.၆၈
၂၀၁၅ ၁၅၇၀၂၁၉ ၃၇၄၈၂၇ ၁၁၉၅၃၉၂ ၁၉.၉ ၄.၈ ၁၅.၁
၂၀၁၆ ၇၉၉၂၆ ၁၅၂၈၀၅၄ ၃၈၈၇၉၂ ၁၁၃၉၂၆၂ ၁၉.၂ ၄.၉ ၁၄.၃
စုစုပေါင်း ၇၀၄၉၅၇၈၂ ၁၀၀ ၇၅၁၄၉၆၆၉ ၁၀၀
၀-၄ ၅၄၆၃၉၇၈ ၇.၇၅ ၆၂၃၂၅၅၂ ၈.၂၉
၅-၉ ၅၊၅၀၉၊၀၅၇ ၇.၈၁ ၅၆၅၇၇၉၁ ၇.၅၃
၁၀-၁၄ ၆၇၀၈၅၉၁ ၉.၅၂ ၅၆၇၁၄၃၅ ၇.၅၅
၁၅-၁၉ ၈၇၂၆၇၆၁ ၁၂.၃၈ ၆၆၀၇၀၄၃ ၈.၇၉
၂၀-၂၄ ၉၀၁၁၄၂၂ ၁၂.၇၈ ၈၄၁၄၄၉၇ ၁၁.၂၀
၂၅-၂၉ ၇၂၂၄၉၅၂ ၁၀.၂၅ ၈၆၇၂၆၅၄ ၁၁.၅၄
၃၀-၃၄ ၅၅၅၃၅၃၁ ၇.၈၈ ၆၉၇၁၉၂၄ ၉.၂၈
၃၅-၃၉ ၄၉၂၁၁၂၄ ၆.၉၈ ၅၅၇၁၀၁၈ ၇.၄၁
၄၀-၄၄ ၄၀၈၉၁၅၈ ၅.၈၀ ၄၉၀၆၇၄၉ ၆.၅၃
၄၅-၄၉ ၃၅၂၂၇၆၁ ၅.၀၀ ၄၀၃၀၄၈၁ ၅.၃၆
၅၀-၅၄ ၂၇၅၅၄၂၀ ၃.၉၁ ၃၅၂၇၄၀၈ ၄.၆၉
၅၅-၅၉ ၁၈၈၇၉၈၁ ၂.၆၈ ၂၆၈၀၁၁၉ ၃.၅၇
၆၀-၆၄ ၁၄၆၄၄၅၂ ၂.၀၈ ၁၈၆၂၉၀၇ ၂.၄၈
၆၅-၆၉ ၁၁၉၇၅၅၀ ၁.၇၀ ၁၃၄၃၇၃၁ ၁.၇၉
၇၀-၇၄ ၁၁၁၉၃၁၈ ၁.၅၉ ၁၁၁၉၉၆၈ ၁.၄၉
၇၅-၇၉ ၆၉၄၁၂၂ ၀.၉၈ ၉၁၃၅၃၁ ၁.၂၂
၈၀+ ၆၄၅၆၀၁ ၀.၉၂ ၉၁၉၅၃၉ ၁.၂၂
မသိ - - ၄၆၃၂၂ ၀.၀၆
၁၇၆၈၁၆၂၉(၂၀၀၆) ၄၃၀၄၉၇၀၉(၂၀၀၆) ၀.၄၁၀၇(၂၀၀၆) ~၂၁၅၂၄၈၅၅(၂၀၀၆) ၀.၈၂၁၅(၂၀၀၆)
၁၇၅၆၁၇၇၈(၂၀၁၁) ၄၅၁၇၄၃၆၆(၂၀၁၁) ၀.၃၈၈၈(၂၀၁၁) ~၂၂၅၈၇၁၈၃(၂၀၁၁) ၀.၇၇၇၅(၂၀၁၁)
၁၉၇၆ ၄၄.၅ ၅၂ ၃.၅
၁၉၈၅ ၄၅.၅ ၅၁.၅ ၃
၁၉၉၆ ၃၉.၅ ၅၆.၁ ၄.၃
၂၀၀၆ ၂၅.၀၈(၁၇၆၈၁၆၂၉) ၆၉.၇၃(၄၉၁၅၇၅၆၂) ၅.၁၉(၃၆၅၆၅၉၁)
၂၀၁၁ ၂၃.၃၇(၁၇၅၆၁၇၇၈) ၇၀.၉၁(၅၃၂၉၇၁၂၂) ၅.၇၂(၄၂၉၀၇၆၉)
၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်နယ်၏ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၄။
ဇယား ၉ – ၂၀၀၆နှစ် နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်နယ်အလိုက် လူဦးရေ ပျမ်းပျ မြင့်မားလာမှု
အလ်ဘိုးရ်ဇ် ၂၀၇၆၉၉၁ ၂၄၁၂၅၁၃ ၃.၀၄
အရ်ဒဘီးလ် ၁၂၂၈၁၅၅ ၁၂၄၈၄၀၀ ၀.၃၃
ဘူရှေးရ် ၈၈၆၂၆၇ ၁၀၃၂၉၄၉ ၃.၁၁
ကျဟားရ်မဟလ်နှင့် ဘခ်သီယားရီး ၈၅၇၉၁၀ ၈၉၅၂၆၃ ၀.၈၆
အရှေ့အာဇာဘိုင်ဂျန် ၃၆၀၃၄၅၆ ၃၇၂၄၆၂၀ ၀.၆၆
ဖါးရ်စ် ၄၃၃၆၈၇၈ ၄၅၉၆၆၅၈ ၁.၁၇
ဂီလားန် ၂၄၀၄၈၆၁ ၂၄၈၀၈၇၄ ၀.၆၂
ဂိုလစ်တာန် ၁၆၁၇၀၈၇ ၁၇၇၇၀၁၄ ၁.၉၀
ဟမ်ဒါးန် ၁၇၀၃၂၆၇ ၁၇၅၈၂၆၈ ၀.၆၄
ဟိုရ်မိုးဇ်ဂါန် ၁၄၀၃၆၇၄ ၁၅၇၈၁၈၃ ၂.၃၇
အီလားမ် ၅၄၅၇၈၇ ၅၅၇၅၉၉ ၀.၄၃
အီစ်ဖဟာန်း ၄၅၅၉၂၅၆ ၄၈၇၉၃၁၂ ၁.၃၇
ကိရ်မားန် ၂၆၅၂၄၁၃ ၂၉၃၈၉၈၈ ၂.၀၇
ကိရ်မာန်ရှားဟ် ၁၈၇၉၃၈၅ ၁၉၄၅၂၂၇ ၀.၆၉
ခူဇီစ်တားန် ၄၂၇၄၉၇၉ ၄၅၃၁၇၂၀ ၁.၁၇
ကဲဟ်ဂီလူယဲဟ်နှင့် ဘိုယဲရ် အဟ်မဒ် ၆၃၄၂၉၉ ၆၅၈၆၂၉ ၀.၇၆
ခူရ်ဒီစ်တားန် ၁၄၄၀၁၅၆ ၁၄၃၉၆၄၅ ၀.၇၃
လိုရီစ်တားန် ၁၇၁၆၅၂၇ ၁၇၅၄၂၄၃ ၀.၄၄
မရ်ကဇ်ဇီ ၁၃၅၁၂၅၇ ၁၄၁၃၉၅၉ ၀.၉၁
မာဇင်ဒရားန် ၂၉၂၂၄၃၂ ၃၀၇၃၉၄၃ ၁.၀၂
မြောက် ခိုရာဆာန် ၈၁၁၅၇၂ ၈၆၇၇၂၇ ၁.၃၅
ကဇ်ဝီးန် ၁၁၄၃၂၀၀ ၁၂၀၁၅၆၅ ၁.၀၀
ကူးမ် ၁၀၄၆၇၃၇ ၁၁၅၁၆၇၂ ၁.၉၃
ရဇဝီခိုရာဆားန် ၅၅၉၃၀၇၉ ၅၉၉၄၄၀၂ ၁.၄၀
ဆင်မ်နားန် ၅၈၉၇၄၂ ၆၃၁၂၁၈ ၁.၃၇
စီစ်တားန်နှင့် ဘလူဂျီစ်တားန် ၂၄၀၅၇၄၂ ၂၅၃၄၃၂၇ 1.05
တောင် ခိုရာဆာန် ၆၃၆၄၂၀ ၆၆၂၅၃၄ ၀.၈၁
တီဟီရန် ၁၁၃၄၅၃၇၅ ၁၂၁၈၃၃၉၁ ၁.၄၄
အနောက် အဇာဘိုင်ဂျန် ၂၈၇၃၄၅၉ ၃၀၈၀၅၇၆ ၁.၄၀
ယဇ်ဒ် ၉၉၀၈၁၈ ၁၀၇၄၄၂၈ ၁.၆၃
ဇန်ဂျားန် ၉၆၄၆၀၁ ၁၀၁၅၇၃၄ ၁.၀၄
စုစုပေါင်း ၇၀၄၉၅၇၈၂ ၇၅၁၄၉၆၆၉ ၁.၂၉
(၁)၂၀၀၆ ခုနှစ်အလ်ဘိုးရ်ဇ်နှင့် တီဟီရန်ပြည်နယ်တို့၏ လူဦးရေအား ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ နှစ်စဉ်သာမန်တိုးတက်မှုနှုန်းများအရ ဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
တရားမဝင် ဘာသာပြန်စာပေ ၁၇
ဇယား၁၀ – ၂၀၀၆ မှ ၂၀၁၁ အတွင်း ပြည်နယ်အလိုက် လူဦးရေတိုးတက်မှုနှုန်းကို ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ပြခြင်း
အလ်ဘိုးရ်ဇ် ၂.၉၅ ၃.၂၁
ဘူရှေးရ် ၁.၂၆ ၁.၃၇
ကျဟားရ်မဟလ်နှင့် ဘခ်သီယားရီး ၁.၂၂ ၁.၁၉
အရှေ့အာဇာဘိုင်ဂျန် ၅.၁၁ ၄.၉၆
ဖါးရ်စ် ၆.၁၅ ၆.၁၂
ဂီလားန် ၃.၄၁ ၃.၃၀
ဂိုလစ်တာန် ၂.၂၉ ၂.၃၆
ဟမ်ဒါးန် ၂.၄၂ ၂.၃၄
ဟိုရ်မိုးဇ်ဂါန် ၁.၉၉ ၂.၁၀
အီလားမ် ၀.၇၇ ၀.၇၄
အီစ်ဖဟာန်း ၆.၄၇ ၆.၄၉
ကိရ်မားန် ၃.၇၆ ၃.၉၁
ကိရ်မာန်ရှားဟ် ၂.၆၇ ၂.၅၉
ခူဇီစ်တားန် ၆.၀၆ ၆.၀၃
ကဲဟ်ဂီလူယဲဟ်နှင့် ဘိုယဲရ် အဟ်မဒ် ၀.၉၀ ၀.၈၈
ခူရ်ဒီစ်တားန် ၂.၀၄ ၁.၉၉
လိုရီစ်တားန် ၂.၄၃ ၂.၃၃
မရ်ကဇ်ဇီ ၁.၉၂ ၁.၈၈
မာဇင်ဒရားန် ၄.၁၅ ၄.၀၉
မြောက် ခိုရာဆာန် ၁.၁၅ ၁.၁၅
ကဇ်ဝီးန် ၁.၆၂ ၁.၆၀
ကူးမ် ၁.၄၈ ၁.၅၃
ရဇဝီခိုရာဆားန် ၇.၉၃ ၇.၉၈
ဆင်မ်နားန် ၀.၈၄ ၀.၈၄
စီစ်တားန်နှင့် ဘလူဂျီစ်တားန် ၃.၄၁ ၃.၃၇
တောင် ခိုရာဆာန် ၀.၉၀ ၀.၈၈
တီဟီရန် ၁၆.၀၉ ၁၆.၂၁
အနောက် အဇာဘိုင်ဂျန် ၄.၀၈ ၄.၁၀
ယဇ်ဒ် ၁.၄၁ ၁.၄၃
ဇန်ဂျားန် ၁.၃၇ ၁.၃၅
စုစုပေါင်း ၁၀၀ ၁၀၀
အီရန်နိုင်ငံအတွင်း အကြီးဆုံးသော တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများမှာ ခေတ်သစ်ဖါရ်စီ၊ ကွရ်ဒီ၊ ဂီလီ၊ မာဇင်ဒရာနီ၊လိုရီ၊သာလီးရှ်နှင့် ဘလူချီတို့ဖြစ်ကြသည်။ တူရကီဘာသာစကားပြောသူများသည် အဇာဘိုင်ဂျန်ပြည်တွင်နေထိုင်ကြသူများဖြစ်ပြီး တူရကီဘာသာစကားသည် အီရန်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယအပြောအများဆုံး ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုရသော် ဒုတိယဘာသာစကားဖြစ်သည်။ သို့သော် တွရ်ကမန်များနှင့် ကရှ်ကာယီတိုင်းရင်းသားများသည် လူနည်းစုများဖြစ်ကြသည်။ ကျန်တိုင်းရင်းသားများအကြား အာရဗီနှင့် အာရှုရီ ဘာသာစကားများကိုလည်း အသုံးပြုကြသည်။အခြားသောဘာသာစကားများဖြစ်သည့် အင်ဒိုဥရောပ ဥပမာ- အရ်မနီ၊ရုရှ၊ပရှ်တူ စသဖြင့် စကားများကိုလည်း လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားများအကြားအသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဂူရ်ဂျီစ်တာန်(Georgian)သည် (Kartvelian ဘာသာစကားပြောသူများအတွင်းမှ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး) အီရန်နိုင်ငံ ဂူရ်ဂျီ(Georgian)တိုင်းရင်းသားများသည် ဖရီဒန်း(ဖရီဒူးန်းရှဲဟ်)မြို့တွင် နေထိုင်ကြပြီး ထိုဘာသာစကားကို အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ဂီလာန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊မာဇင်ဒရာန်းပြည်နယ်၊အီစ်ဖဟာန်းပြည်နယ်နှင့် တီဟီရန်ပြည်နယ်များအတွင်း နေထိုင်ကြသော(Georgian)တိုင်းရင်းသားတို့သည် Kartvelian ဘာသာစကားကို အသုံးမပြုကြတော့ချေ။ သို့သော် ၎င်းတို့၏မျိုးရိုးဗီဇကိုဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားကြသည်။အီရန်နိုင်ငံတွင် Circassians သည် အလွန်မှပင် ကြီးမားသော လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတစ်စုဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များအတွင်း အလွန်မှပင် Circassians (ဖါရ်စီဘာသာဖြင့် (ကျဲလ်ကစီ)) ဘာသာစကားသည် အလွန်ပင်စွဲဆောင်မှုကောင်းသော ဘာသာစကားဖြစ်သည့်အတွက် အီရန်တွင် အသုံးများခဲ့သည်။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ တိုင်းပြည်တခွင်တွင် ထင်ရှားစွာပြန့်နှံ့သွားခဲ့သည်။ ၎င်းသူ(Circassiansတို့သည်) (Georgian) တိုင်းရင်းသားပြီးနောက် ဒုတိယ အကြီးမားဆုံးသော ကဖ်ကားစ် ( Caucasus) အနွယ်ဖွားများဖြစ်ပေသည်။
ယဟူဒီ(ဂျူး)လူမျိုးတို့သည် အီရန်နိုင်ငံ၌ Cyrus မင်းကြီး တည်ထောင်ခဲ့သော Achaemenid ပါရှန်းအင်ပါယာ ခေတ်ကာလမှ ရှိနေခဲ့ကြပြီး အီရန်၌ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် ဂျူးလူမျိုး ၁၄၀၀၀၀မှ ၁၅၀၀၀၀ ခန့် နေထိုင်ခဲ့ကြလေသည်။ တီဟီရန် ဂျူးကော်မတီ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ လက်ရှိကာလ၌ အီရန်တွင် ဂျူးလူမျိုး ၂၅၀၀၀မှ၃၅၀၀၀ ခန့် အီရန်တွင်နေထိုင်လျှက်ရှိကြီး ၎င်းတို့အတွင်းမှ ၁၅၀၀၀ ဝန်းကျင်သည် တီဟီရန်မြို့အတွင်း နေထိုင်သူများဖြစ်ကြသည်။ ကျန်သူများသည် အခြားမြို့များဖြစ်ကြသော ဟမ်မဒါန်း၊ ရှီရားဇ်၊အိစ်ဖဟာန်း၊ ကိရ်မာန်ရှားဟ်၊ယဇ်ဒ်၊ကိရ်မားန်၊ ရဖ်ဆန်ဂျားန်၊ဘရူဂျရ်ဒ်၊ စနန်ဒဂျ်၊သဘ်ရေးဇ်နှင့် အူရူမီယာ မြို့များတွင် နေထိုင်ကြသည်။ သို့ပေမဲ့လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် စစ်တမ်းကောက်ခံချက်အရ ဂျူးလူမျိုးဦးရေ ၈၇၅၆ ဦးရေသာ အီရန်တွင် စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းများအရ (၂၀၁၃ ခုနှစ် စစ်တမ်းအရ) အီရန်တွင်အသုံးပြုဘာသာစကားများကိုအောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြထားသည်။ဖါရ်စီ၊လိုရီ၊ဂီလ်ကီနှင့် မာဇင်ဒရာနီ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ အဇာဘိုင်ဂျန်နှင့် အခြားတူရကီစကားများ၁၈ရာခိုင်နှုန်း၊ကွရ်ဒီ၁၀ရာခိုင်နှုန်း၊ အရဗီ ၂ ရာခိုင်နှုန်း ၊ဘလူးချ် ၂ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အခြားဘာသာစကားများ ဖြစ်သော အရ်မနီ၊ ဂွရ်ဂျီ(Georgian) ၊ခါရ်ကစီ၊အာရှူရီစသဖြင့် တို့သည် ၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပေသည်။
ထိုကဲ့သို့သောကွန်ဂရက်စာကြည့်တိုက်နှင့်အစ္စလာမ်၏စွယ်စုံကျမ်း(လီဒန်)တွင် အီရန်ရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများကိုအောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြထားပေသည်။၎င်းတို့မှာ- ပါးရှန်းများ(လိုရီများနှင့် အခြားသော လိုရီတိုင်းရင်းသားမှ ဆင်းသက်သွားသော အီရန်(ပါးရှန်း)လူမျိုးများ ၇၁ ရာခိုင်နှုန်း၊ အဇာဘိုင်ဂျန်လူမျိုး၁၆ရာခိုင်နှုန်း၊ ကူရ်ဒ်လူမျိုး၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ အာရဗ်လူမျိုး ၂ ရာခိုင်နှုန်း ၊ဘလူးချ် လူမျိုး၂ ရာခိုင်နှုန်း၊တူရ်ကမန်လူမျိုးများ၁ရာခိုင်နှုန်း၊ တူရကီ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဥပမာ ကရှ်ကာယီ ၁ ရာခိုင်နှုန်း ၊ဖါရစီလည်းမဟုတ် တူရကီလည်းမဟုတ်သော လူမျိုးများဖြစ်သည့် (အရ်မနီ၊ ဂွရ်ဂျီ၊ အာရှူရီနှင့် ဘာစရီ အပြင်အခြားသော လူမျိုးများ)လည်းရှိနေပေသည်။ယခင်သတင်းရင်းမြစ်များနှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ရင်းမြစ်များအတွက် (Languages and ethnicities in Iran) အီရန်ရှိဘာသာစကားများနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဟူသော နေရာတွင် လေ့လာပါ။
အီရန်လူဦးရေအား မြို့ပြနှင့် ကျေးလက်နေ လူဦးရေများကို ဆင့်ကဲခွဲခြားထားသည်၊
အီရန်ပြည်နယ်များတွင် ၂၀၁၃ ခုနှစ် လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုများ
ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် များအရ အီရန်သည်လည်း ၎င်း၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်းပုံစံအပြင် ကမ္ဘာတွင် မြိုပြတိုးတက်မှုအလျင်မြန်ဆုံးစာရင်းတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။၂၀၁၅ခုနှစ် လူဦးရေစာရင်း ကောက်ခံချက်အရ အီရန်လူဦးရေအတွင်းမှ ၇၃.၄ ရာခိုင်နှုန်းသည် မြို့ပြများတွင်နေထိုင်သူများဖြစ်ကြပြီး ၁၉၅၀ခုနှစ် ထက် ၂၇ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာသည်။ အီရန်တွင် မြို့ပြစည်ပင်သာယာရေးဥပဒေနှင့် ကျင့်ထုံးများပြောင်းလဲပြီးနောက် ကျေးလက်ဒေသများအတွင်း မြို့ပြတိုးတက်မှုများကို လျှော့ချခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း စုစုပေါင်း မြို့ ၄၀၀ ကို တည်ခဲ့သည်။
၁။ တီဟီရန် (တီဟီရန်ပြည်နယ်) ၁၂၇၆၅၂၃၈ (မြို့ကြီးနှင့်ဆက်နေသော ရွာများနှင့် စက်မှုဇုန်များအပါအဝင်ဖြစ်သည်)
(၈၀၈၈၂၈၇ မြို့သူမြို့သားများ ကိုယ်တိုင်)
၂။ မရှ်ဟဒ်(ခိုရာဆန်) ၂၈၆၈၃၅၀ (ဆင်ခြေဖုံးလူဦးရေအပါအဝင်)
(၂၄၁၀၈၀၀ မြို့သူမြို့သားများ ကိုယ်တိုင်)
၃။ အိစ်ဖဟာန် (အိစ်ဖဟာန် ပြည်နယ်) ၃၄၃၀၃၅၃ ၎င်း၏ မြို့ပြဧရိယာနှင့် မြို့နှင့်ဆက်နေသော ဆင်ခြေဖုံးနေရာများအပါအဝင်)
(၁၆၀၂၁၁၀ မြို့သူမြို့သားများ ကိုယ်တိုင်)
၄။ သဘ်ရေးဇ် (အဇာဘိုင်ဂျန် Azarbaijan) ၁၅၉၇၃၁၉ (သင့်လျော်သောမြို့သူမြို့နှင့်အဓိကဆင်ခြေဖုံး)
(၁၃၇၈၉၃၅ မြို့သူမြို့သားများ ကိုယ်တိုင်)
၅။ အလ်ဘိုးရ်ဇ်ပြည်နယ် (اအလ်ဘိုးရ်ဇ်ပြည်နယ်) ၁၃၇၇၄၅၀
၆။ ရှီရားဇ် (ဖါရ်စ် ပြည်နယ်) ၁၂၀၄၈၈၂
အီစ်ဖဟာန်းမြို့ရှိ ရှားဟ် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ဝင်ပေါက်(အေမာမ်ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်(သို့) ရှာဟွဒ်ဒီးန် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော် တစ်ခု။ယင်းဝတ်ကျောင်းတော်သည် ဆဖဝီမင်းဆက်လက်ထက် အကောင်းဆုံး ဖါရ်စီဗိသုကာလက်ရာတစ်ခု။
၁၉၅၆မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထ ဘာသာတရာကိုအခြေခံထားသော ကုလသမဂ္ဂစာရင်းဝင်အီရန်လူဦးရေ
၁၈၆၅၄၁၂၇ ၉၈၄ ၂၄၇၇၁၉၂၂ ၉၈.၈ ၃၃၃၉၆၉၀၈ ၉၉.၁ ၇၀၀၉၇၇၄၁ ၉၉.၄ ၇၄၆၈၂၉၃၈ ၉၉.၄
ခရစ်ယာန် ၁၁၄၅၂၈ ၀။၆ ၁၄၉၄၂၇ ၀.၆ ၁၆၈၅၉၃ ၀.၅ ၁၀၉၄၁၅ ၀.၂ ၁၁၇၇၀၄ ၀.၂
ဇရ်သွရှ်သီ ၁၅၇၂၃ ၀။၁ ၁၉၈၁၆ ၀.၁ ၂၁၄၀၀ ၀.၁ ၁၉၈၂၃ ၀.၀ ၂၅၂၇၁ ၀.၀
ဂျူး ၆၅၂၃၂ ၀။၃ ၆၀၆၈၃ ၀.၂ ၆၂၊၅၈ ၀.၂ ၉၊၅၂ ၀.၀ ၈၇၅၆ ၀.၀
အခြား ၅၉၊၅၆ ၀။၃ ၇၇၀၇၅ ၀.၃ ၅၄၂၃၄ ၀.၁ ၄၉၁၀၁ ၀.၁
အမည်မသိ ၄၅၈၃၈ ၀။၂ ၅၉၅၈၃ ၀.၂ ၂၀၅၃၁၇ ၀.၃ ၂၆၅၈၉၉ ၀.၄
အီရန်တွင် အစ္စလာမ်ဥပဒေနှင့်ပက်သက်ပြီး တင်းကျပ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အီရန်တွင် ၉၉ရာခိုင်နှုန်းခန့်သော လူတို့သည် မွစ်လင်(မ)များဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့အတွင်းမှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ရှီအာဂိုဏ်းဝင်များဖြစ်သည်။ထို့ပြင် အီရန်သည်တရားဝင် ရှီအာ နိုင်ငံဖြစ်ပေသည်။ ထိုနိုင်ငံတွင် ၉ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် စွန္နီဂိုဏ်းဝင်များဖြစ်ကြသလို ၎င်း၏အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသည်လည်း စွန္နီနိုင်ငံများဖြစ်သည်။ အီရန်တွင် ဘာသာြခားများဖြစ်သော ခရစ်ယာန်၊ ဇရ်သို့ရှ်၊ ယဟူဒီ၊ ဘဟာယီ၊ မာန်ဒါန်နှင့် ပါရ်စီ ဘာသာများကို ကိုးကွယ်သောသူများလည်းရှိသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ထက်ပင်လျှော့နည်းပေသည်။ယင်းဘာသာခြားတို့အကြား လူဦးရေအများဆုံးသည် အရ်မနီများဖြစ်ကြပြီး ၎င်းသူတို့သည် အာမေနီယားကျောင်းတော်၏ညွှန်ကြားမှုအောက်၌ရှိပြီး နောက်လိုက်အင်အားသည် ၁၁၀၀၀၀၊၂၅၀၀၀၀နှင့် ၃၀၀၀၀၀ ဝန်းကျင်မျှရှိသည်။ အီရန်တွင် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းစုစုပေါင်း၁၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ဘဟာယီတို့သည် ဘာသာခြားလူနည်းစုတို့အကြားတွင် လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်ကြပြီး လူဦးရေ ၃၀၀၀၀၀ ခန့်ရှိပေမဲ့ ၎င်းသူတို့ကို တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုထားပေ။(ထို့အတွက်ကြောင့်လည်းသန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံရာတွင် ထည့်သွင်းကောက်ခံမှုမပြုခဲ့ပေ)။ခေတ်အဆက်ဆက်တွင်လည်း ၎င်းသူတို့သည် ဖိအားပေးမှုများခံခဲ့ကြရသည်။ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး၁၉၇၉ခုနှစ်နောက်ပိုင်း၌ ၎င်းတို့အပေါ်တင်းကျပ်မှုများနှင့်အတူ ကွပ်မျက်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊အရပ်ဖက်လူ့အခွင့်အရေးချုပ်ကိုမှုများနှင့်၎င်းတို့အားလွပ်လပ်ခွင့်မပေးမှုများ ပြုလုပ်လာခဲ့သလို အဆင့်မြင့်ပညာရေးဆည်းပူးမှုအား ခွင့်ပြုမှုမရရှိခဲ့သည့်အပြင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် များကိုလည်း တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းများကို ပိုမိုခံခဲ့ကြရသည်။အီရန်တွင် အာရှူရီခရစ်ယာန်လူဦးရေသည် ၂၀၀၀၀ ဝန်းကျင်မှ ၇၀၀၀၀ ခန့်အထိရှိသည်။ မာန်ဒါန် ဘာသာဝင်ဦးရေနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူဦးရေခန့်မှန်းမှုများတွင် ကွဲပြားမှုများရှိသည်။ပရစ်စာနယ်ဇင်းအဖွဲ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ အီရန်တွင် မာန်ဒါန်ဘာသာဝင် ၅၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ ခန့်ရှိသည်ဟုဖြစ်သည်။သို့သော် Alarabiya သတင်းဌာနမှ ၎င်းဘာသာဝင်သည် အီရန်၌၂၀၁၁ တွင် ဦးရေ ၆၀၀၀၀ကျော်ရှိသည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
ပြည်ပရောက်အီရန်နိုင်ငံသားများဆိုသည်မှာ ၎င်းသူတို့သည် အီရန်နိုင်ငံဖွားများဖြစ်ကြပြီး ယင်းသူတို့၏သားသမီးများမှာ ပြည်တွင် နေထိုင်သူများကို ဆိုလိုပါသည်။ပြည်ပတွင်နေထိုင်၍အလုပ်လုပ်ကိုင်သော အီရန်နိုင်ငံသားတို့သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံကျော်ကို မိမိတို့ နေထိုင်မှုအတွက် ပေးချေခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အီရန်နိုင်ငံသား ၄ သန်းမှ ၅ သန်းခန့် ပြည်ပတွင် နေထိုင်လျှက်ရှိကြသည်။ ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကနေဒါ၊ ဥရောပ၊ ပါးရှန်းပင်လယ်ကမ်းခြေ အာရဗ်စော်ဘွားနိုင်ငံများ၊ ရကီ၊ ဩစတြေးလျ နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတို့တွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ နေထိုင်ကြသည်။။ ၂၀၀၀ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံချက်အရနှင့် အခြားထုတ်ဖေါ်ပြောကြားချက်များအရ ၊ခန့်မှန်းခြေ ၁ သန်း အီရန်-အမေရိကန် နေထိုင်လျှက်ရှိကြသည်။အထူးသဖြင့်၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ် မြို့ရှိ Westwood ဧရိယာတွင် အီရန်နိုင်ငံသား၇၂၀၀၀ ခန့်နေထိုင်သည့်အတွက် ၎င်းနေရာကို Tehrangelesဟု ပင်တွင်စေခဲ့သည်။ အခြားကြီမားသောမြို့ကြီးများဖြစ်သည့်ဒူဘိုင်း တွင် ၃၀၀၊၀၀၀၊ ဗန်ကူးဗားမြို့၊ လန်ဒန်၊ တိုရွန်တို၊ ဖရန်စစ္စကိုပင်လယ်အော်ဧရိယာ၊ ဝါရှင်တန် D.C။၊ ဗျူနိုအေးရိစ်မြို့ ၊ မက္ကစီကိုစီးတီး၊ တော့ဟုမ်း၊ ဘာလင်၊ ဟမ်းဘတ် နှင့် ဖရန့်ဖွတ်များတွင်လည်းနေထိုင်ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ စုစုပေါင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးသည် ၁.၃ ထရေလီယံ ဖြစ်သည်.
အခြားသော အီရန်ကြီး တွင်နေထိုင်သော အီရန်နိုင်ငံသားများနှင့် အခြားအီရန်မျိုးနွယ်များအကြားခြားနားမှုရှိသည်ကိုလည်းသိထားရပေမည်။ ယင်းသူတို့သည် အီရန်လူမျိုးကြီးများဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့၏ဘာသာစကားသည်လည်း Indo-European မှဆင်းသက်လာလေသည်။.
အီရန်သည် ကမ္ဘာတွင် နိုင်ငံခြားသားဒုက္ခသည်များကို ခိုလှုံခွင့်ပေးသောနိုင်ငံများအတွင်း အကြီးမားဆုံးသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။နိုင်ငံအတွင်း၌ နိုင်ငံခြားသားဒုက္ခသည်ဦးရေ ၁ သန်းကျော်ရှိသည်။ ၎င်းတို့အတွင်းမှ အများဆုံးသည် အာဖဂန်နိစ်တန်မှဖြစ်ပြီး (ဒုက္ခသည် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း)ရှိသည်။အီရတ်မှ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ နှစ်မှစ၍ ၎င်းသူများကို မိမိတို့၏နိုင်ငံများသို့ ပြန်လည်ပို့ရန်အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခိုလှုံခွင့်ပေးရေးကော်မတီ UNHCRနှင့် အာဖဂန်နိစ်တန် အကြီးအကဲများနှင့် စကားပြောခဲ့သည်။၁၉၇၉မှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်အတွင်း UNHCR အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခိုလှုံခွင့်ပေးရေးကော်မတီသည် ပါကစ်တန်နိုင်ငံအတွင်း ခိုလှုံလျှက်ရှိသော အာဖဂန်နိစ်တန်နိုင်ငံသားများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော်ကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ၎င်းဒုက္ခသည်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အီရန်နိုင်ငံသို့ အမေရီကန်ဒေါ်လ ၁၅၀ သန်းကိုသာ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အီရန်အစိုးရသည် ဒုက္ခသည်များကို စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် တစ်ရက်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ သို့သော် UNHCR အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခိုလှုံခွင့်ပေးရေးကော်မတီသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်အတွင်း အီရန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားသားဒုက္ခသည်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈ သန်းသာလျှင် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ အီရန်တွင် နိုင်ငံခြားသားဒုက္ခသည် ၃၀၀၀၀၀ ကျော်ကို အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ပိုက်ကွန်ကိုအီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု (၁၉၇၉-၂၀၀၈)။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့တန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုပြီးလူဝင်အီထက်ကြောင့်ထွက်ခွာ
၀-၁၄ နှစ်: ၂၃.၆၉%(အမျိုးသား ၉၉၃၇၇၁၅/အမျိုးသမီး ၉၄၄၉၇၁၆)
၁၅-၂၄ နှစ်: ၁၇.၅၈%(အမျိုးသား ၇၃၈၆၈၂၆/အမျိုးသမီး ၆၉၉၈၁၈၈)
၂၅-၅၄ နှစ်: ၄၆.၈၇%(အမျိုးသား ၁၉၅၃၄၇၉၄/အမျိုးသမီး ၁၈၈၁၇၄၈၀)
၅၅-၆၄ နှစ်: ၆.၅၈%(အမျိုးသား ၂၆၅၀၀၄၉/အမျိုးသမီး ၂၇၃၁၉၉၇)
၆၅ နှစ်ကျော်: ၅.၂၈%(အမျိုးသား ၁၉၉၀၉၆၁/အမျိုးသမီး ၂၃၂၆၅၄၄)(၂၀၁၅။)
စုစုပေါင်း: ၂၈.၈ နှစ်
ထီး: ၂၈.၆ မီနှစ်ပေါင်း
အမျိုးသမီး: ၂၉.၁ နှစ်(၂၀၁၅။)
၁၇.၉၉ မွေးဖွား/၁၊၀၀၀ လူဦးရေ(၂၀၁၅။)
မှာမွေးဖွား: ၁.၀၅ ထီး(s)/အမျိုးသမီး
၀-၁၄ နှစ်: ၁.၀၅ ထီး(s)/အမျိုးသမီး
၁၅-၂၄ နှစ်: ၁.၀၆ ထီး(s)/အမျိုးသမီး
၂၅-၅၄ နှစ်: ၁.၀၄ ထီး(s)/အမျိုးသမီး
၅၅-၆၄ နှစ်: ၀.၉၇ ထီး(s)/အမျိုးသမီး
၆၅ နှစ်ကျော်: ၀.၈၆ ထီး(s)/အမျိုးသမီး
စုစုပေါင်းလူဦးရေ: ၁.၀၃ ထီး(s)/သမီး(၂၀၁၅။)
စုစုပေါင်းလူဦးရေ: ၇၁.၁၅ နှစ်
ထီး: ၆၉.၅၆ နှစ်
အမျိုးသမီး: ၇၂.၈၂ နှစ်(၂၀၁၅။)
အဓိပ္ပါယ်:အသက် ၁၅-၂၄ ရေးနိုင်၊ဖတ်နိုင်ပါသည်
Y -ခရိုမိုဆုန်း DNA [ပြင်ဆင်ရန်]
Y -ခရိုမိုဆုန်း DNA ကိုအထီးနွယ်ကိုယ်စားပြုထားပြီးအီရန်သည်အောက်ပါအတိုင်း Y-ခရိုမိုဆုန်း haplogroups, R1 (25%), J2 (23%) က G (14%), J1 (8%) E1b1b (5% L (4%), Q (4%)အဖြစ်သိုလှောင်ထားလေသည်။, စုစုပေါင်းခရိုမိုဇုန်းများ 85% ထက်မကပါဝင်သည်။
Mitochondrial DNA သည် mtDNA အမျိုးသမီးနွယ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အီရန်သည် mitochondrial DNA ကိုအဆိုပါ Y-DNA နွယ်ထက်ပိုပြီးအနောက်တိုင်း Eurasian နွယ်ကြောင်းပြသထားသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အီရန်အနွယ်ဝင် ပျမ်းမျှ90% ကျော်သည် အနောက် Eurasian MtDNA ဖြစ်ကြသည် (၂၀၁၃) ။
၎င်းတို့အတွင်းမှ U3b3 အနွယ်ဝင်များသည် အီရန်လူမျိုးနှင့် ကဖ်ကားဇ်လူမျိုးတို့ဖြစ်ကြသည်။သို့သော် U3b1a သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းအနီးတစ်ဝိုက်တွင် များပြားစွာ ပြန့်နှံ့လျှက်ရှိသည်။
အီရန်နိုင်ငံတွင် Y-ခရိုမိုဆုမ်းနှင့် Mitochondrial DNA သည် အီရန်နိုင်ငံမြောက်ဘက်ပိုင်းဒေသရှိ လူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ဥပမာ ဂျီလာကီးစ်နှင့် မာဇင်ဒရာနီများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ မျိုးနွယ်သည် တောင်ပိုင်းရှိ လူမျိုးများဖြစ်သည့် ဂွရ်ဂျီ၊အရ်မနီများနှင့် အဇာဘိုင်ဂျန်များနှင့်တူညီပြီး chromosomal DNA မှ ဆင်းသက်လာသည်။ အီရန်တွင် ၁ (သို့) ၂ ရာခိုင်နှုန်းမျှရှိသော ဘလူးချ် လူမျိုးတို့သည် patrilinial and mitochondrial DNA မှ ဖြစ်ကြပြီး အနောက်မြောက်အာရှ အုပ်စုများနှင့် တူညီမှုရှိသည်။
အီရန်လူဦးရေအတွင်း မျိုးဗီဇမူကွဲမှု၏ အဆင့်ဆင့် ကော့ကေးဆပ်, Anatolia နှင့်ဥရောပအခြားအုပ်စုများမှနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြသည်။
People of Iranian ancestry[ပြင်ဆင်ရန်]
The "Tats" are ethnic Persian caucasians and an Iranian people, presently living within Azerbaijan and Russia (mainly Southern Dagestan). The Tats are part of the indigenous peoples of Iranian origin in the Caucasus.
↑ Iran Census Results 2016 Archived December 23, 2015, at the Wayback Machine. United Nations
↑ Asia-Pacific Population Journal၊ United Nations။ A New Direction in Population Policy and Family Planning in the Islamic Republic of Iran။ 2009-02-14 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-04-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ International News | World News - ABC News။ Abcnews.go.com (2012-11-30)။ 2012-12-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Central bank: Income equality improved in Iran။ Tehran Times။ 2012-12-04 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook။ cia.gov။ 2012-02-03 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Iran Census Results 2011 Archived December 23, 2015, at the Wayback Machine. United Nations
↑ John Weeks။ Weeks Population။ weekspopulation.blogspot.com။
↑ Circassian (people)။ Migrationinformation.org။ 2015-10-15 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 28 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Annamoradnejad, Rahimberdi (2014). "Effects of Urbanization Law and Regulations in Iran's Geographical Space". Iranian Conference of Geographical Sciences. University of Tehran.
↑ Middle East :: IRAN။ CIA The World Factbook။ 2012-02-03 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Iran Mandaeans in exile following persecution။ Alarabiya.net (2011-12-06)။ 2011-12-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Iran Daily - Domestic Economy - 02/14/07 Iran: Coping With The World's Highest Rate Of Brain Drain (March 6, 2007)။
↑ Regueiro et al. 2006, Nasidze et al. 2008
↑ Complete Mitochondrial DNA Diversity in Iranians (November 2013)။2January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pilkington, H. (November 27, 2002). Islam in Post-Soviet Russia - Among other indigenous peoples of Iranian origin were the Tats, the Talishes and the Kurds. Psychology Press, 27. ISBN 9780203217696။
↑ R. Khanam,"Encyclopaedic Ethnography of Middle-East and Central Asia:P-Z, Volume 1", Global Vision Publishing Ho, 2005. pg 746:"The contemporary Tats are the descendants of an Iranian-speaking population sent out of Persia by the dynasty of the Sasanids in the fifth to sixth centuries."
↑ T. M. Masti︠u︡gina, Lev Perepelkin, Vitaliĭ Vi͡a︡cheslavovich Naumkin (1996). An Ethnic History of Russia: Pre-Revolutionary Times to the Present - The Iranian Peoples (Ossetians, Tajiks, Tats, Mountain Judaists). Greenwood Publishing Group, 80. ISBN 9780313293153။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အီရန်နိုင်ငံ၏_လူဦးရေစစ်တမ်း&oldid=418892" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၀၄:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။